ယခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ ဒိန်းမတ်သံရုံးတွင် ဒေါ်လာ၂၀၀နှင့်ညီမျှသော ကျပ်ငွေ ပညာသင်ဆုထောက်ပံ့ကြေးကိုလျှောက်ထားနိုင် - People Media Myanmar
Home ယခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ ဒိန်းမတ်သံရုံးတွင် ဒေါ်လာ၂၀၀နှင့်ညီမျှသော ကျပ်ငွေ ပညာသင်ဆုထောက်ပံ့ကြေးကိုလျှောက်ထားနိုင်
ယခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ ဒိန်းမတ်သံရုံးတွင် ဒေါ်လာ၂၀၀နှင့်ညီမျှသော ကျပ်ငွေ ပညာသင်ဆုထောက်ပံ့ကြေးကိုလျှောက်ထားနိုင်
ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၀ သြဂုတ်လ ၁၈ရက်
ယခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ ဒိန်းမတ်သံရုံးတွင် ဒေါ်လာ၂၀၀နှင့်ညီမျှသော ကျပ်ငွေ ပညာသင်ဆုထောက်ပံ့ကြေးကိုလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
သြဂုတ်လ ၁၈ရက် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ဒိန်းမတ်သံရုံး၏ ၎င်းဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများဆက်တ်နိုင်ရန်အတွက်ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်ေ ကြာင်းသိရသည်။
ထုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအမှန်တကယ်နေထိုင်သူ ၊ စီးပွားရေး၊လုံခြုံရေး အရအခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသူ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင် နှစ်စဉ် စာမေးပွဲအောင်မြင်ပါက ပညာသင်ဆု ၄နှစ်ဆက်တိုက် ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းပညာသင်ဆုများကိုလျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် CDNHရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများနှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးများတွင်လည်းကောင်း လျှောက်လွှာများထုတ်ယူနိုင်ပြီး www. Cdnh .org/ rakhine scholarships အွန်လိုင်းတွင်လည်းရယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
ယခုနှဈ ရခိုငျပွညျနယျမှ တက်ကသိုလျဝငျတနျးအောငျမွငျသညျ့ ကြောငျးသား၊ကြောငျးသူမြား ဒိနျးမတျသံရုံးတှငျ ဒျေါလာ၂၀၀နှငျ့ညီမြှသော ကပျြငှေ ပညာသငျဆုထောကျပံ့ကွေးကိုလြှောကျထားနိုငျ
ရနျကုနျ၊ ၂၀၂၀ ဩဂုတျလ ၁၈ရကျ
ယခုနှဈ ရခိုငျပွညျနယျမှ တက်ကသိုလျဝငျတနျးအောငျမွငျသညျ့ ကြောငျးသား၊ကြောငျးသူမြား ဒိနျးမတျသံရုံးတှငျ ဒျေါလာ၂၀၀နှငျ့ညီမြှသော ကပျြငှေ ပညာသငျဆုထောကျပံ့ကွေးကိုလြှောကျထားနိုငျကွောငျးသိရသညျ။
ဩဂုတျလ ၁၈ရကျ ရနျကုနျမွို့အခွစေိုကျ ဒိနျးမတျသံရုံး၏ ၎င်းငျးဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှ ထုတျပွနျခကျြအရ ရခိုငျပွညျနယျရှိ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား တက်ကသိုလျကြောငျးမြားဆကျတျနိုငျရနျအတှကျပညာသငျဆုမြားလြှောကျထားနိုငျ ကွောငျးသိရသညျ။
ထုတျပွနျခကျြအရ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသငျနှဈတှငျ တက်ကသိုလျဝငျတနျးစာမေးပှဲ အောငျမွငျသူ ဖွဈရမညျဖွဈပွီး ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးအမှနျတကယျနထေိုငျသူ ၊ စီးပှားရေး၊လုံခွုံရေး အရအခကျအခဲမြားကိုရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေသူ ဖွဈရမညျဖွဈပွီး တက်ကသိုလျကြောငျးမြားတှငျ နှဈစဉျ စာမေးပှဲအောငျမွငျပါက ပညာသငျဆု ၄နှဈဆကျတိုကျ ဆကျလကျပံ့ပိုးပေးသှားမညျဖွဈသညျ။
၎င်းငျးပညာသငျဆုမြားကိုလြှောကျထားလိုသူမြားအနဖွေငျ့ CDNHရုံးမြားတှငျလညျးကောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျရှိ မွို့နယျပညာရေးမှူးရုံးမြားနှငျ့ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာနရုံးမြားတှငျလညျးကောငျး လြှောကျလှာမြားထုတျယူနိုငျပွီး www. Cdnh .org/ rakhine scholarships အှနျလိုငျးတှငျလညျးရယူနိုငျကွောငျးသိရသညျ။
« ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရန်ကုန်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအဖြစ် လာရောက်လုပ်ကိုင်သည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်ရန်နှင့်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရရန် အခက်ကြုံနေကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး အဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဒေါ်ထုမေပြောကြား
Covid 19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ဒုတိယလှိုင်းကြီးမားနိုင်ပြီး တိုင်းပြည်ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုပါရိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း ပြည်ေ ထာင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသတိပေးပြောကြား »